PSY ၏ GangnamStyle အကမှာ မြန်မာ့အကကိုကူးယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » PSY ၏ GangnamStyle အကမှာ မြန်မာ့အကကိုကူးယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
PSY ၏ GangnamStyle အကမှာ မြန်မာ့အကကိုကူးယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ဦးသု on Oct 19, 2012 in Copy/Paste |6comments
Thu Wai သုံးသပ်ချက်
၂၀၀၇ လောက်က စင်ကာပူ တမားဆက်ပိုလီ သင်္ကြန်ပဒေသာ ကပွဲ ယမမင်းပြဇာတ်မှာ ကနေတဲ့ပုံပါ။ နောက်ပြီး မြန်မာ့ ဇာတ်သဘင်တွေမှာ ပွဲဦးထွက် ဇတော်တိုက် ခန်းမှာ လဲ မြင်းစီးအက ပါပါတယ် ။ အဲဒါတွေကို ကြည့် ခြင်းအားဖြင့် PSY ရဲ့oppa gangnam style မြင်းစီးအက ဟာ မြန်မာရိုးရာ အကတွေကို ကူးယူ ပြီးနာမည်ကြီးသွားတာလို့ ထင်ပါတယ်။
သေချာအောင် youtube မှာ oppa gangnam style ဆိုပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြပါ။
ခုရက်ထဲ ဒီအက ကလဲဘာမှန်သာမသိတာ
ချိုးသွားတယ် ဆိုလားပဲ …
ပြီးတော့ သူ့အက မှာ အကမျိုးစုံ ပေါင်းစပ် ထားတယ်လို့လည်း
ဒီတော့ ဒီအကလည်း ပါချင်ပါပေမပေါ့ …
ပီအက်စ်ဝိုင် အနေနဲ့ လဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိသမျှ အကအားလုံးကို လိုက်လေ့လာပြီးမှ ၊ ဂန်းနမ်စတိုင် ကို ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
Rama About this sound pronunciation (help·info) (Devanāgarī: राम ; Rāma,; Burmese: ရာမ Jàma̰ ; Javanese: Ramavijaya ; Khmer: ព្រះរាម Phreah Ream ; Lao: ພຣະຣາມ Phra Ram ; Malay: Megat Seri Rama; Maranao: Raja Bantugan; Tamil: ராமர் Ramar; Telugu: రామ Rama; Thai: พระราม Phra Ram) or Ramachandra is the seventh avatar of the god Vishnu in Hinduism, andaking of Ayodhya in Hindu scriptures. In few Rama-centric sects, Rama is considered the Supreme Being, rather than an avatar. Rama was born in Suryavansha (Ikshvaku Vansh) later known as Raghuvansha after king Raghu. Based on Puranic genealogy, Rama is believed by Hindus to have lived in the second Yuga called Treta Yuga, before Krishna who was born towards the end of Dwapara Yuga. Rama is traditionally considered to have appeared in the last quarter of Treta Yuga.
ဘောလီးဝုဒ်အထိ ထိုးဖောက်ရောက်ရှိ သွားသည့် Gangnam Style
ဂင်းနစ် မှတ်တမ်းတွင် ကမ္ဘာ့ လူကြိုက် အများဆုံး ဗီဒီယို အဖြစ် မှတ်တမ်းတင် ခံရသည့် တောင် ကိုရီးယား အဆိုတော် Psy ၏ Gangnam Style (ဂမ်းနမ်စတိုင်) တေးသီချင်းသည် ဘောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင် လောကကိုပါ ထိုးဖောက် လာခဲ့ပြီဟု သိရသည်။
ဘောလီးဝုဒ် မင်းသားကြီး အမီတာဘချမ်း၊ ရှာရွတ်ခန်းနှင့် ကာထရီနာ ကိုင်ဖ်တို့သည်လည်း KBC ရုပ်သံတွင် ဂမ်းနမ် စတိုင် ကကွက်များဖြင့် ကပြ ဖျော်ဖြေ ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဘောလီးဝုဒ် အကျော်အမော် အဆိုပါ အနုပညာရှင် သုံးဦးသည် မကြာမီ ထုတ်လွှင့်ပြသမည့် ၎င်းတို့ ပါဝင်သော “Jab Tak Hai Jaan” ရုပ်ရှင် အရောင်း မြှင့်တင်ရန် အတွက် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ KBC ရုပ်သံတွင် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း ပြုလုပ်ပြီး ဂမ်းနမ် စတိုင်ကကွက် များကို ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းမှ ပရိသတ်များ အံ့သြစေရန် ကပြခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။